DOWNLOAD IRIS पी-40 Warhawk - द प्रयोग FSX र P3D - Rikoooo
आकार 72.2 एमबी
डाउनलोड7006
03-08-2012 सिर्जना गरियो
15-10-2012 परिवर्तन गरियो
FSX को Curtiss पी-40E Kittyhawk सुविधा लागि प्याकेज "राष्ट्रमंडल को किनेकी" को सफल जारी गरेपछि आइरिस आफ्नो कल्पना अभ्यास र नयाँ उत्पादन पी-40 Warhawk, पी-40T दुई नयाँ भेरिएसनहरूमा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय र पी-40X।
पी-40T एक दुई सीट, पी-40 airframe को दुई इन्जिन भेद छ। अमेरिकी युद्ध समयमा पी-40C एक दुई इन्जिन अवधारणा संग प्रयोग गरे हुँदासम्म, यो गरिब स्थिरता मुद्दाहरू पिरोल्दा थियो र उत्पादन गए कहिल्यै।
पी-40X एक सीट काटियो पखेटा र एक Merlin इन्जिन सिस्टम मा एक Contra-घुमाउँदा प्रोपेलर संग पी-40E छ।
2048x2048 पिक्सेल बिटमैप मालिकको सबै paintschemes सबै ग्राफिक्स कार्ड FSX चलिरहेको सक्षम मार्फत सुपर तेज bumpmaps र अचम्मको दृश्यहरू प्रदान लागि 1024x1024 पिक्सेल पुन: आकार!
360 डिग्री ध्वनि IRIS AudioworX बाट शानदार soundset FSX लागि विशेष अनुकूलित panning।
सबै भन्दा राम्रो कला शानदार weathering र दृश्य स्पष्टताको लागि उपलब्ध अनुमति प्रविधी को प्रयोग गरेर शानदार paintschemes एक किसिम।
एक उच्च गुणस्तरको paintkit सबै महिमित 2048x2048 पिक्सेल गुणस्तर प्रयोगकर्ताहरू repaints को पूर्ण अनुकूलन अनुमति सबै weathering तहहरू सुविधा!
जेड द्वीप उडान परीक्षण केन्द्र बाट शानदार उडान मोडेल।
तपाईं IRIS पी-40 Warhawk प्रणाली र विमान उपकरण बिरामी, चेकलिस्ट र थप पूरा सञ्चालन गर्न जान्नु आवश्यक छ सबै जानकारी एउटा गहिराई मा पायलट पुस्तिका।
भिडियो मा पी-40X
IRIS पी-40 Warhawk - द प्रयोग FSX र P3D डाउनलोड